Exercise – Page6– Healthy Life Journal
ဗိုက်ပူနေပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်အပြည့်အဝပေးပြီး မလုပ်နိုင်သူတို့အတွက် ရိုးစင်းသော လေ့ကျင့်ခန်း
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ဗိုက်ကလည်းပူနေတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်ကလည်း အပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းကို ဂျပန်ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းချုပ်ရေးပညာရှင်က မျှဝေထားပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ဗိုက်ပူသူတွေကို ချပ်ရပ်တင်းရင်းတဲ့ ဝမ်းဗိုက်အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့...
ဆီးချိုရှိသူတွေက ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မေမေ့မှာ ဆီးချိုရောဂါ ရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ်။ NoeNoe(FB) A. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ကြွက်သားတွေကို လှုပ်ရှားစေတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်သွေးလှည့်ပတ်မှု မြန်ဆန်စေတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်က...
အားကစားလုပ်သူတို့ အဖြစ်များသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာများနှင့် အိမ်တွင်းကုသနည်း
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အားကစားလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အားကစားလုပ်တဲ့အခါ အများအားဖြင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကတော့- (၁) ဖိနပ်၊ အားကစားပစ္စည်းတွေ ပွတ်တိုက်မိတာကြောင့် အရည်ကြည်ဖု(Blister)တွေ ရတတ်ပါတယ်။...
ခါးလှည့်ကွင်းသုံးပြီး ခါးလှည့်တာက မလိုချင်တဲ့အဆီပိုတွေ လျော့ကျစေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား . . .
ခါးတစ်ဝိုက်မှာထိန်းပြီး ဝှေ့ယမ်းကာ ကစားရတဲ့ ခါးလှည့်ကွင်းတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျမှုကို အများကြီး အထောက်အပံ့ပေးကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ခါးလှည့်ကွင်းသုံးပြီး တစ်နာရီလေ့ကျင့်တာကြောင့် တစ်နာရီအတွင်း လေးမိုင်ကနေ လေးမိုင်ခွဲခန့် လမ်းလျှောက်သလိုမျိုး တူညီတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အသုံးပြုလိုက်ပြီး ခါးလှည့်ကွင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျလှပကာ သန်စွမ်းကျစ်လျစ်စေတယ်လို့...
အလုပ်စားပွဲနေရာမှာပင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် အလွယ်ကူဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း ၅ မျိုး
—————–၊ ကိုထက် ၊——————- အလုပ်ထဲမှာ တကုပ်ကုပ်နဲ့ ညောင်းညာမနေဘဲ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေဖို့ အလုပ်စားပွဲနေရာမှာတင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (က) ကြောင်နွားနည်းကျင့်စဉ် (Cat Cow) ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်ကို ကြမ်းပေါ်မှာ အပြားလိုက်ချထားပေးပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးပေါ်တင်ထားပါ။ ထိုအနေအထားအတိုင်း...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး သရေစာများ
—————-၊ ဇွန် ၊—————– အားကစားခန်းမမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူတွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်း ပရိုတင်းတချို့ကို စားသုံးသင့်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ပရိုတင်းကို ဘယ်လောက်များများနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ စားသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်မှာ ကြွက်သားတွေဟာ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့ အသင့်ပြင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ကြွက်သားတွေ ကြီးထွားသန်စွမ်းဖို့ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုစားပေးဖို့...
—–၊ လရိပ်မေ ၊—– အစာမကြေ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တဲ့အခါ ရေများများသောက်တာ၊ အစာကြေလွယ်တဲ့ အစားအစာစားတာနဲ့ ယောဂကျင့်တာတို့ဟာ အစာကြေညက်စေတဲ့ နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုယောဂကျင့်စဉ်တွေကို ကျင့်ပေးရင် အစာကြေလွယ်စေမလဲဆိုတာသိအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ထိုင်ခုံဟန်ပန် ခြေထောက်ကို စုံရပ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးမြှောက်ရင်း ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်နေတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့...